သတိုးမဟာသရေစည်သူဘွဲ့တံဆိပ် လည်ဆွဲဖဲကြိုးဖြင့် နမူနာ ပုံ
၃ သတိုးမဟာသရေစည်သူဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူများ
↑ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၄)။ "ဘွဲ့၊ တံဆိပ်၊ သင်္ဂဟ"။ in စွယ်စုံကျမ်းစာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၈ (ပထမအကြိမ် ed.)။ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့။: စာပေဗိမာန်။ pp. ၃၉၅ - ၄၀၁။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သတိုးမဟာသရေစည်သူ&oldid=748920" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၆:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။